HCC: Tsiahy tamin'ny fangatahana Fialan'ny Filoha tamin'ny 2015
mardi, 15 mai 2018 07:23
22 mey 2015: Fangatahana fialan'ny Filoha teo anivon'ny Antenimieram-pirenena
27 mey 2015: Tonga tao amin'ny HCC ny taratasy fitoriana
02 jona 2015: Namaly teo anatrehan'ny HCC ny Filoham-pirenena, tamin'ny alalan'ny taratasy nataon'ny mpisolovava azy, ary nanazava fa tsy mitombona ny fitoriana (Mémoire en défense)
02 jona 2015: Namaly indray ny mpitory ary nanamafy ny fitoriany, tamin'ny alalan'ny mpisolovava
10 jona 2015: Audience publique, fitsarana azon'ny rehetra hatrehina, samy nitondra am-bava nifanatrehana ny roa tonta, tamin'ny alalan'ireo mpisolovava azy avy.
12 jona 2015: Nivoaka ny didy avy amin'ny HCC, tsy nekena ny fanalana ny Filoha, atao ny pacte de responsabilité.
Raha lazaina amin'ny teny fohy izany, dia rehefa misy mitory, dia manana zo hiaro tena ilay toriana, ka lazaina azy aloha fa nisy nitory ianao, ary ambara azy, iza no nitory ary inona ilay hitoriana, io ilay hoe signification.
Manana fepotoana hamaliana ilay fitoriana ilay voatory, mety 72 ora na izay fepotoana omen'ny Fitsarana avo.
Raha tsy mamaly ny voatory dia mandeha ny raharaha, raha mamaly ara-potoana kosa izy, dia omena ny mpitory indray izany fiarovantena izany ka afaka mamaly indray ny mpitory.
Afaka mivezivezy eo hatrany izany fifamaliana izany raha tsy efa hitan'ny mpitsara fa efa ampy ny fifanazavana.
Azon'ny Fitsarana avo atao indray, toy io nataony tamin'ny 2015 io, no manao fitsarana hiainoana am-bava ny andaniny sy ny ankilany, ka dia na ilay toriana, na ny mpisolovava azy, na ny mpitory, dia samy mandresy lahatra, azon'ny rehetra hatrehina eo imason'ny Mpitsara (Audience publique).
Aorian'izay vao misintona ny fitsarana mamoaka didy.
Ny Didim-pitsarana avoakan'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana moa dia didy tsy azo ivalozana, izany hoe tsy azo hanaovana fampakarana na fandravana didy, na ilay hoe appel. Fa dia miatra avy hatrany.
Anjaran'ny governemanta no mampiatra ny didy izay navoakan'ny Fitsarana rehetra.
Ka raha tsy nihatra izany ilay Pacte de responsabilité, dia andraikitra fenon'ny governamanta no tsy nampihatra azy.
15 andro teo no nanaovan'ny HCC ny famoahana didy tamin'ny 2015.
25 aprily 2018 kosa no nandraisan'ny HCC ny fitorian'ireo député vitsivitsy hanalana ny Filoham-pirenena, efa 20 andro isika izao, tsy misy fetra teren'ny lalàna ny amin'io ny HCC amoahany didy.